"Mercedes Actros" - emkhayeni ezisindayo-duty amaloli futhi tractor, umthuthukisi nomkhiqizi okuyinto edumile emhlabeni Stuttgart inkampani. Eqenjini, esikhiqiza zikanokusho futhi zikanokusho ibhizinisi-class sedan, waphenduka ngempumelelo phezu ukulungisa womshini jikelele isisindo imoto ephinde zokhahlamba kusuka amathani 18 kuya 25.
Kafushane mayelana nezimoto
Itholakala amamodeli we "Mercedes-Benz Actros", kusukela ngo-1996. Ngo-2003, bathola ushintsho uhlelo. Futhi namhlanje ekukhanyeni uyaphuma ezimbalwa ezahlukene ongakhetha tractor ezihlukahlukayo isondo amafomula. Kuyinto ukuguqulwa 4x2, 4x4, 6x2 kanye 6x4. models futhi kuhluke chassis ezahlukene kanye nesisindo. Zonke izinguqulo nemizimba ezahlukene nezinamathiselo. Ngokuvamile, iqembu ukukhiqizwa esungulwe sina. Akubuzwa, ngoba lezi zimoto bayahamba Tshala Worth am Rhein. Futhi - enye yezindawo ezinkulu kakhulu futhi ohahela isikhundla kakhulu emhlabeni ekukhiqizeni amaloli emhlabeni.
Isici ehlukile ephawula imodeli "Mercedes-Benz Actros" kuba phambi e-tekhkontrol uhlelo okuthiwa Telligent. Ngenxa kwenzeka ngempela isikhathi processing kolwazi ivela izinzwa ezihlukahlukene efakwe lokubolekwa umgwaqo ohlukile. Futhi elibukhali ngokulinganisa ngenxa umthwalo langempela futhi, yebo, agqoke powertrain, ukuwudlulisa amabhuleki. Lokhu kuphumela kahle ngcono amayunithi futhi sithuthukise iphelela interservice. Lesi sibalo manje km 150 000.
Kuyini ezithakazelisayo ukwazi
Kuyaziwa ukuthi iqembu Mercedes-Benz kuyinto "inombolo eyodwa" emhlabeni. Kodwa kuyinto ngokuya izimoto. Futhi lokho maqondana amaloli? Kule ndaba, inkampani futhi waphumelela. Kusukela ngo-2008, yena umenzi yokuqala emhlabeni wonke amaloli, esibekela (standard!) Ukudluliswa okuzenzakalelayo ngokugcwele. Futhi ngo-2010, waqala ukukhiqizwa idatha imoto ngesikhathi indawo ukukhiqizwa eRussia - okungukuthi, Chelny.
Emhlabeni wonke, ukuthengisa ezingaphezu kuka 700.000 amakhophi "Mercedes-Benz Actros." Iphinde inciphe kancane futhi izinkulungwane bawela ensimini ka ezweni lethu. Ezinye entsha, abanye - ne edolobheni. Futhi inani babebhala eRussia uqobo. Izinzuzo buphawuleka kakhulu kubhekwa gumbi emangalisayo ukhululekile (emasikweni inkampani), indawo enhle kakhulu automatic transmission, handling kakhulu, esebenzisekayo eziqondisa ngokungenamkhawulo variable, elithambile emoyeni ukumiswa nokuningi.
Bambalwa abantu bazi, kodwa ukuthuthukiswa emotweni, "Mercedes-Benz Actros", isithombe okuyinto uvezwa izigidigidi ngenhla, kwathiwa etshaliwe (!) Euro. Ngaphezu imali wachitha isikhathi esiningi. Kodwa umphumela kwaba ngaphezu ayakufanelekela. Lo mshini inama mass emisha ezahlukene. "Mercedes-Benz Actros" wathola nemibiko emihle kuphela - futhi lokhu akumangalisi.
Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, ukubukeka kwayo. ukuthuthukiswa Design eyingoduso e Bertrand Janssen. Brand iloli elisha ayichitha emgudwini womoya amahora angaphezu 2600! Lokhu kwakubalulekile ngoba kuphela ngokusebenzisa ucwaningo ephethwe ukukhulisa streamlining ugandaganda. I ekwazi ukumelana namandla omoya ngcono - iloli okuhlala isikhathi eside. Onjiniyela inkampani "Mercedes" is kahle waqonda futhi izuzwe emphumeleni omuhle. Truck "Mercedes-Benz Actros" Kwatholakala hhayi kuphela ezikhangayo, kodwa futhi ezisebenzayo. Ikakhulukazi uyajabula abashayeli egijima amabhodi - bangathumela eligoqiwe emaphethelweni phansi Izinsimbi usukume ukusula ingilazi. Namanje ikhanga luhlaka ububanzi futhi eqinile. Lokhu kuhle kakhulu, ikakhulukazi uma ushayela emigwaqweni anolaka.
Futhi ekugcineni, amagama ambalwa ngalokho izinkomba lobuchwepheshe ungajabulisa "Mercedes-Benz Actros", isithombe zazo okusesihlokweni esithi. Le nguqulo entsha baba abanikazi umugqa diesel OM471 chungechunge. 12.8-litre uxhumekile kwi-inthanethi Izithupha ayatholakala izinguqulo ezine ezihlukene. I okungenani enamandla ukhiqiza 421 amahhashi. Ukusebenza esilandelayo injini 450-amahhashi. Ngemva kwakhe - iyunithi for 480 amalitha. a. Ukuqoqa out uhlu amayunithi injini 510-hp. Futhi elawulwa 12-diapazaonnoy PPC kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi. Ngesikhathi oluvala amasondo ezingemuva kukhona isilinda ezine womoya. In the version odlule kwakukhona amabili kuphela.
Izindleko lezi zimoto dollar ayinkulungwane 100 - I-entsha, imodeli yesimanje, yebo. Kodwa ngokuvamile, uma udinga iloli ke ukhetho best awulona ukuthola.
Namasongo nge izintelezi - imigexo ukuthi ukushintsha imizwa yakho!